काठमाडौं । २०७५ साउन २७ गते आइतबार दिउँसोको ४ बज्दै थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको कार्यकक्षमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी हुर्रिंदै छिरे र उनले एक्कासि सचिव थपलियाको टेबुलमा मुड्की बजार्न थाले । भण्डारीको त्यस्तो हर्कत देखेपछि सचिव थपलियालाई असह्य भयो र उनले भने, ‘तँ यहाँ आएर गुन्डागर्दी गर्छस् ? शिक्षा विभागमा गुन्डागर्दी गर्ने, आतंक मच्चाउने तैं होइनस् ?’
उपाध्यक्ष भण्डारी रिसले चूर थिए र उनले सचिव थपलियालाई थर्काउँदै भने, ‘तैंले के ठानेको छस् ? म तँलाई देखाइदिन्छु । हामीले भनेको कर्मचारीको सरुवा नगर्ने ?’ उपाध्यक्ष भण्डारीले उद्दण्डता प्रदर्शन गरिरहेका बेला संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे र रामचन्द्र अधिकारी पनि सँगै थिए । तर, उनीहरू पनि भण्डारीको उद्दण्डता हेरेर बस्नुबाहेक स्थितिलाई सहजीकरण गर्न अग्रसर देखिएनन् ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सरुवाको मौसमले छोपेकोे छ । साउनभरि र भदौ १५ गतेसम्म निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा हुने भएको हुँदा मन्त्रालयमा सरुवा माग्ने, सरुवा गराउनेहरूको ताँती नै लाग्न पुगेको छ । तर, आइतबार मन्त्रालयमा भएको अप्रिय घटनाले भने निजामती कर्मचारीहरूको हर्कतको पर्दाफास गरेको छ ।
जुम्ला घर भएका र अहिले शिक्षा विभागमा कार्यरत उपाध्यक्ष भण्डारी सो दिन एक जना कर्मचारीको सरुवाका लागि मन्त्रालयमा पुगेका थिए । डोल्पाको एक स्थानीय तहमा कार्यरत शाखा अधिकृत नेत्रराज गिरीलाई आफ्नै गृहजिल्ला जुम्लामा सरुवा गर्न उनी मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा उनी सिधै उपसचिव ऋषिराज आचार्यको कार्यकक्षमा पुगे । आचार्यलाई उनले ‘मैले भनेको कर्मचारीलाई किन सरुवा नगरेको ?’ भनी झम्टिन पुगे । तर, सरुवा हेर्ने काम कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा कार्यरत प्रेम लुइँटेलको भए पनि उनी आचार्यमाथि खनिन पुगेका थिए । आवेशमा आफ्नो कार्यकक्षमा छिरेका भण्डारीलाई शान्त तुल्याउने मनशायले आचार्यले पनि ‘हुन्छ हामी मिलाउँदै छौं’ भनेर जवाफ दिए । तर, आचार्यको जवाफपछि भण्डारी झनै उत्तेजित बने र उनको कार्यकक्षको टेबुल, भित्तामा मुड्की हाने, ढोकामा लात्तीले हाने र नजिकै रहेको गमला झारेर फुटाइदिए ।
रिस र आवेगमा आएका भण्डारी आफूसँगै आएका घिमिरे र अधिकारीलाई लिएर सचिव थपलियाकहाँ पुगेका थिए र सचिवको टेबुलमा मुड्की बजारेका थिए । सचिव थपलिया र भण्डारीबीच कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर केही समय ‘तँतँ र मम’ समेत चलेको थियो । उपाध्यक्ष भण्डारीलाई संगठनभित्र पनि अराजक र उद्दण्ड स्वभावको कर्मचारी नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । यो विषयमा मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यसँग बुझ्दा उनले भने, ‘यो त्यति ठूलो घटना होइन । सामान्य भनाभन मात्र भएको हो । हिँड्ने बेलामा गमला झरेर फुटेको चाहिँ साँचो हो ।’
अधिकारीको स्वास्थ्य झन् जटिल
काठमाडौं अदालतमा विकृतिको डंगुर
दोस्रो कुलमानको फोस्रो कुरा
झिटीगुन्टा बोकेर फर्कंदै लक्की
श्रीमती नपरेपछि बबन्डर
मातृकाको हचुवापनले करोडौं घाटा
एकीकरण टुंग्याउन कार्यदल फेरि सक्रिय